Saagi - Dalaga - Akaakuu Barruu
Gatii lakkoofsa Roomaan shallaga. Hangiin gatii 0 fi 3999 gidduu ta'uu qaba.
Barruun barruu lakkoofsa Roomaa bakka bu'udha.
=ARABIC("MXIV") 1014 kenna.
=ARABIC("MMII") 2002 kenna.
Faankishiniin ASC ASCII dalgee-guutuu gara dalgee-walakkaattii fi arfiiwwan katakanaatti jijjiira. Diraa barruu deebisa.
Barruun barruu arfiiwwan jijjiiramuu qaban qabatudha.
Faankishinii JISiis ilaali
Maqaawwan maallaqa Thai hammachuudhaan, lakkoofsa gara barruu Thai itti jijjiira.
Lakkoofsa is any number. "Baht"iin gara qaama integiraalii lakkoofsaatti miiltessama, fi "Satang"iin gara qaama dessimaalii lakkoofsaatti miiltessama.
=BAHTTEXT(12.65) diraa arfiiwwan Thai hiikkaa "Baht kudha lamaa fi Satang shan" qabu deebisa.
Intiijera pozatiivii sirna lakkaawwii irraa hundee adda ba'e gara barruutti jijjiira. Dijiitiiwwan 0-9 fi qubeewwan A-Z ni fayyadamamu.
Lakkoofsi intiijera pozatiivii jijjiiramuu qabudha.
hundee lakkoofsaa hundee sirna lakkoofsaa mul'isa. Intiijerii pozatiivaa 2 fi 36 gidduu jiru kamiyyu ta'uu danda'a.
DheerinniXiqqaan (dirqala) dheerina xiqqaa tartiiba arfii uumamee jiruu murteessa. Yoo barruun dheerina xiqqaa mul'ifame caalaa gabaabaa ta'e, zeeroowwan gara bitaa diraatti ida'amu.
=BASE(17;10;4) 0017 sirna dessimalii keessa jiru deebisa.
=BASE(17;2) 10001 sirna baayinarii keessa jiru deebisa.
=BASE(255;16;4) 00FF sirna heksaadessimaalii keessa jiru deebisa.
Haala gabatee lakkaddaa ammeetiin lakkoofsa gara arfiitti jijjiira. Lakkoofsichi intiijera dijiitii-lamee ykn dijiitii-sadee ta'uu danda'a.
Lakkaddaawwan 127 caalan barruuyyeessa arfii sirna keetiirratti hundaa'uu danda'a(fakkeenyaaf iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), kanaaf fiduun hin danda'amu.
Lakkoofsi lakkoofsa 1 fi 255 gidduu arfiidhaaf gatii lakkaddaa bakka bu'udha.
=CHAR(100) arfii d deebisa.
="abc" & CHAR(10) & "def" arfii sarara haaraa gara diraatti saaga.
Arfiiwwan maxxansaaf hin gargaarre hundi diraa irraa ni haqamu.
Barruun barruu arfiiwwan maxxanuu hin dandeenye irraa haquu qabnu agarsiisa.
Arfii jalqabaa diraa barruu keesa jiruuf lakkaddaa lakkoofsaa keenna.
Barruun barruu lakkaddaan arfii jalqabaa barbaadamuufii qabudha.
=CODE("Hieronymus") 72 kenna, =CODE("hieroglyphic") 104 kenna.
Lakkaddaan asitti fayyadamame ASCII hin ibsu, garuu gabatee lakkaddaa amma fe'ame agarsiisa.
Diraawwan barruu hedduu gara diraa tokkootti walitti qaba.
=CONCATENATE("Good ";"Morning ";"Mrs. ";"Doe") Akkam Bultan obbo. Doe: deebisa.
Barruu arfiiwwan wajjiin jiru sirna lakkoofsaa irraa gara intiijera pozatiivii hundee lakkoofsaa hundee kenname keessa jiruutti jijjiira. hundee lakkoofsaa hangii 2 hamma 36tti qaba. Iddoowwanii fi caancalootni dhiisamaniiru. Dirreen Barruu haala irratti hin hundaa'u.
Yoo hundeen lakkoofsaa 16 ta'e, x ykn X dursu ykn 0x ykn 0X, h ykn Hn miiltaa'e, irra darbama. Yoo hundeen lakkoofsaa 2 ta'e, b ykn Bn miiltaa'e irra darbama. Arfiiwwan biroo qaama sirna lakkoofsaa hin taane dogongora maddisiisu.
DECIMAL("Barruu"; Hundee lakkoofsaa)
Barruun barruu jijjiiramuu qabudha. Lakkoofsa heksaadessimaalii, kan akka A1 fi wabii mandhee A1 adda baasuuf, lakkoofsicha mallattoo waraabbii keessa kaawuu qabda, fakkeenyaaf, "A1" ykn "FACE".
=DECIMAL("17";10) 17 kenna.
=DECIMAL("FACE";16) 64206 kenna.
=DECIMAL("0101";2) 5 kenna.
Lakkoofsa gara hamma dhangii maallaqaa keessa jiru,bakka dessimaalii adda ba'etti siiqeetti jijjiira. Dirree Gatii keessa lakkoofsa gara maallaqaatti jijjiiramuu qabu galchi. Dirqalaan, bakkeewwan dessimaalii dirreeDessimaalotaa keessa galchuu ni dandeessa. Yoo gatiin tokkoyyu adda hin baane ta'e, lakkoofsonni dhangii maallaqaa keessa jiran hundi bakkeewwan dessimaalii lamaan mul'atu.
Dhangii maallaqaa sirna qindaa'inootaa ke keessatti qindeessiteetta.
Gatiin lakkoofsa, wabii mandhee lakkoofsa qabatee, ykn foormulaa lakkoofsa kennudha.
Dessimaalonni lakkoofsa dirqalaa bakkeewwan dessimaaliidha.
=DOLLAR(367.456;2) $367.46 kenna. Gargar baasaa dessimaalii qindaa'ina gitoo biyyaa ammee ilaallatu fayyadami.
Diraawwan barruu lama wal madaalsisee yoo isaan walfkkaatu ta'e DHUGAA kenna. Faankishiniin kun qub-suukanaawaadha.
Barruun1 barruu jalqaba walmadaalsisuu jiru agarsiisa.
Barruun2 walmadaalsiidhaaf barruu lammaffaati.
=EXACT("Sirnootni maaykiroo Aduu";"Sirnootni maaykiroo Aduu") SOBA kenna.
BarruuBarbaadi barruu barbaadamuu qabu agarsiisa.
Barruun barruu bakkatti barbaachi gaggeeffamudha.
Qubannoon (dirqala) qubannoo barruu keessaa bakka irraa barbaachi eegaludha.
=FIND(76;998877665544) 6 kenna.
=FIXED(1234567.89;3) akka diraa barruutti 1,234,567.890 kenna.
Faankishiniin JIS ASCII dalgee-walakkaa gara ASCII dalgee-guutuu fi arfiiwwan katakanaatti jijjiira. Diraa barruu kenna.
Faankishinii ASCiis ilaali
Arfii jalqabaa ykn arfiiwwan barruu deebisa.
Barruun barruu bakkatti jechoonni walakkaa jalqabaa murteessamuu qabanidha.
Lakkoofsi (dirqala) barruu jalqabaaf lakkoofsa arfiiwwanii adda baasa. Yoo ulaagaan kun hin ibsmne ta'e, arfiin tokko ni deebi'a.
=LEFT("firii";3) “ala” deebisa.
Dheerina diraa iddoowwan qabuu deebisa.
Barruun barruu dheerinni isaa murteessamuu qabudha.
=LEN("Akkam Oolte") 14 deebisa.
=LEN(12345.67) 8 deebisa.
Qubee guguddaa diraa barruu keessa jiran gara qubee xixiqqaatti jijjiira.
Barruun barruu jijjiiramuu qabu ibsudha.
=LOWER("Aduu") aduu deebisa.
Diraa barruu kan barruu deebisa. Ulaagaaleen iddoo jalqabaa fi lakkoofsa arfiiwwanii adda baasa.
MID("Barruu"; Jalqaba; Lakkoofsa)
Barruun barruu arfiiwwan kasheessuu of keessatti qabata.
Jalqabni iddoo jalqaba arfii barruu kasheessuu keessa jirudha.
Lakkoofsi lakkoofsa arfiiwwanii qaama barruu keessa jiru adda baasa.
=RIGHT("Sun";2) un deebisa.
Qubee jalqabaa jechoota diraa barruu hunda keessa jiru qubee guddaa godha.
Qaama diraa barruu diraa barruu biraatiin bakka buusa. Faankishiniin kun arfiiwwanii fi lakkoofsota (ofumaan gara barruutti jijjiiraman) bakka buusuuf gargaara. Firiin faankishinii yeroo hunda akka barruutti mul'ata. Yoo Lakkoofsa barruudhaan bakka bu'e irratti shallaggiiwwan dabalataa adeemsisuu barbaadde, faankishinii VALUE fayyadamuudhaan deebistee gara lakkoofsaatti jijjiiruu si barbaachisa.
Yoo barruun lakkoofsota qabatu kamiyyu akka lakkoofsaatti akka inni hiikamu hin barbaaddu ta'ee fi ofumaan gara barruutti jijjiirame mallattoo waraabbii keessatti hammatamuu qaba.
REPLACE("Barruu"; Qubannoo; Dheerina; "BarruuHaaraa")
Barruun barruu kutaan isaa bakka bu'u agarsiisa.
Qubannoon bakka barruu keessa jiru iddootti bakka bu'iinsi jalqabu agarrsiisa.
Dheerinni lakkoofsa barruuwwanii Barruu bakka bu'uu qabudha.
BarruuHaaraan barruu Barruu bakka bu'u agarsiisa.
=REPLACE("1234567";1;1;"444") "444234567" deebisa. Arfiin tokko qubannoo 1 irra jiru BarruuHaaraa guutuudhaan bakka bu'a.
Diraa arfii lakkoofsa garagalchoota kennamaniin irra deddeebi'a.
Barruun barruu irra deddeebi'amuu qabudha.
Lakkoofsi lakkoofsa irra deddeebbiiti.
Firiin inni ol-aanaan arfiiwwan 255 ta'uu ni danda'a.
=REPT("Akkam bultan";2) Akkam bultanAkkam bultan deebisa.
Arfii ykn arfiiwwan barruu dhumaa deebisa.
Barruun barruu kutaan isaa mirgaa murteessamuu qabudha.
Lakkoofsi (dirqala) lakkoofsa arfiiwwanii kutaa mirgaa barruuti.
Lakkoofsa gara lakkoofsa Roomaatti jijjiira. Hangiin gatii 0 fi 3999 gidduu ta'uu qaba,haalatootni intiijeroota 0 irraa hanga 4 ta'uu danda'a.
Lakkoofsi lakkoofsa gara lakkoofsa Roomaatti jijjiiramuu qabudha.
Haalatni (dirqala) hamma salphisuu agarsiisa. Akkuma gatiin guddachaa deemu, lakkoofsa Roomaa salphisuunis guddachaa deema.
=ROMAN(999) CMXCIX deebisa.
=ROMAN(999;0) CMXCIX deebisa
=ROMAN (999;1) LMVLIV deebisa
=ROMAN(999;2) XMIX deebisa
=ROMAN(999;3) VMIV deebisa
=ROMAN(999;4) IM deebisa
BarruuBarbaadi barbaadamuu qabudha.
Barruun barruu iddootti barbaachi gaggeeffamudha.
Qubannoon (dirqala) iddoo barruu keessaa bakkatti barbaachi jalqabamudha.
=SEARCH(54;998877665544) 10 deebisa.
Barruu moofaa diraa keessaa barruu haarawaan bakka buusa.
Barruun barruu kutaawwan barruu adda ta'an keessatti wal jijjiiruu qabanidha.
BarruuBarbaachi kutaa barruu adda ta'e kan bakka bu'amuu qabudha (al hedduu).
BarruuHaarawni barruu kutaa barruu adda ta'e bakka bu'uuf jirudha.
Uumamni (dirqala) uumama barruu barbaaduu kamtu akka bakka bu'amuu qabu mul'isa. Yoo ulaagaan kun hafe barruu barbaachi yeroo hunda bakka bu'ama.
=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") 12abc12abc12abc deebisa.
=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) 12312abc123 deebisa.
Faankishiniin kun barruu galtee, ykn yoo galteen barruu miti ta'e diraa barruu duwwaa deebisa.
Yoo Gatiin diraa baruu ykn diraa barruu agarsiisa ta'e, Tn diraa barruu sana deebisa; ta'uu baannaan diraa barruu duwwaa deebisa.
=T(12345) diraa duwwaa deebisa.
=T("12345") diraa 12345 deebisa.
Dhangiin barruu dhangii ibsudha. Haala afaan dhangii mandhee keessatti qindaa'een gargarbaastota dessimaalii ykn kumootaa fayyadami.
=TEXT(12.34567;"###.##") barruu 12.35 deebisa
=TEXT(12.34567;"000.00") barruu 012.35 deebisa
Jechoota gidduutti iddoo arfii qeenxee hambisuudhaan, diraa irraa iddoowwan haqa.
Lakkaddaa lakkoofsaa gara arfii ykn qubee lakaddaa qeenxeetti jijjiira.
=UNICHAR(169) arfii mirga abbummaa deebisa ©.
Barruu keessatti arfii lakaddaa qeenxee jalqabaaf lakaddaa lakkoofsaa deebisa.
=UNICODE("©") lakkoofsa lakaddaa qeenxee 169 arfii mirga abbummaaf deebisa.
Diraa dirree barruu keessatti adda ba'e gara qubee guguddaatti jijjiira.
Barruun qubeewwan xixiqqoo ati gara qubee guguddaatti jijjiiruu barbaaddu agarsiisa.
=UPPER("Good Morning") AKKAM BULTE deebisa.
Diraa barruu gara lakkoofsaatti jijjiira.
Barruun barruu gara lakkoofsaatti jijjiiramuu qabudha.
=VALUE("4321") 4321 deebisa.
Title is: Faankishinoota Barruu